मन्त्रिपरिषद विस्तार हुदै, को–को बन्नेभए मन्त्री ? — Imandarmedia.com
मन्त्रिपरिषद विस्तार हुदै, को–को बन्नेभए मन्त्री ?
काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएपछि खड्का मन्त्री बन्ने पक्का भएको हो। सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच मंगलबार साँझ भएको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री तत्काल नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो।
‘सरकारको छवि धुमिल हुन नदिन परराष्ट्रमन्त्री तत्काल नियुक्त गरौं, अरु प्रमुख मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त गर्दै जाने सहमति भएको छ,’ गठबन्धन स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सहमति पनि भएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. नारायण खड्कालाई परारष्ट्रमन्त्री बनाउने बताएका छन् । कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा थप उथलपुथल नभए खड्काले भोलि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
अरु मन्त्रालय भागवण्डाबारे छलफल गर्न भोलि फेरि बैठक बस्ने नेताहरुले बताएका छन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानूनमन्त्री भएका छन् भने माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री छन् ।
यस्तै १० साउनमा कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पाउने सहमति भएको छ ।सहरी विकास मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीका लागि छुट्याईएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो समयदेखि रिक्त रहेको पराराष्ट्र मन्त्रालयमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गर्ने भएको छन् । आज बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले उनलाई परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा अनुमोदन गरेको हो।
लामो समयसम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। आज बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा उनले सो प्रस्ताव राखेको र अन्य नेताहरु पनि सहमत बनेको स्रोतले बतायो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनुपर्ने तथा सार्क अध्यक्षका हैसियतमा नेपालले मन्त्रीस्तरीय बैठकसमेत बोलाएकाले परराष्ट्रमन्त्री चाँडो नियुक्त गर्नुपर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। डा. खड्काको नाममा सहमति भएपछि भोली नै उनलाई सपथ खुवाउने बताइएको छ ।
यस विषयमा देउवाले पार्टीमा भने छलफल गरेका छैनन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरुको सहमति बेगर एकलौटीरुपमा मन्त्री नियुक्त गरिएमा नमान्ने बताए । यस विषयमा छलफल गर्न बोली ९ बजे आफ्नो समूहको बैठक बोलाउने उनले जानकारी दिए।
यसैगरि, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाँचदलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार सुरु भएको पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै नेता नेपालले स्थानीय तहसम्म गठबन्धन पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुलुकमा अहिले दुई प्रकारका राजनीतिक धार विद्यमान रहेको उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेशपरस्त तथा राजतन्त्रपरस्त शंक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोच जसको मुख्य प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहेको छ ।
अर्को वाम लोकतान्त्रिक समिकरण, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरिरहेका छन् ।’
वाम लोकतान्त्रिक समिकरणमा सामेल राजनीतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्ग चरित्र फरक फरक भए पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्,
यस मोर्चाबन्दी र सहकार्यलाई कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने साथै स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुनेछौँ र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
हामी राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौँ । हामी अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अपारदर्शी प्रवृत्तिको सख्त विरोधी रहनेछौँ र नियमितता, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था, चुस्तदुरुस्तता, शीघ्रता, पारदर्शीता आदिमा पूर्ण प्रतिबद्ध रही यी मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पूर्ण इमानदारिताका साथ लागिपर्नेछौँ ।